Filtrer les éléments par date : lundi, 06 mai 2019
lundi, 06 mai 2019 20:23
Irmah Naharimamy: Viavy mahavit'azy
Izany no teny faneva nentin'i Kandida ho solombavambahoaka, Irmah Naharimamy natolotry ny antoko politika, Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, laharana faha 8, eto Toamasina I.
Diabe carnaval no nisantarany ny fampihelezan-kevitra nitety ny fokontany maro teto Toamasina antampo-tanàna, niaraka tamin'ireo mpiara-miasa, mpiray lisitra, ary mpanohana azy.
Niavaka tamin'izany ny fiarahana tamin'ireo ray aman-dreny na nitovy na tsy nitovy firehana ara-politika, nampisehoany ny fampihavanana marina ho an'ny zanaky Toamasina miray.
lundi, 06 mai 2019 19:20
Rastany: Namaky lay tamin'ny alalan'ny carnaval
Nanomboka anio alatsinainy faha 06 mey ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavambahoaka.
Namaky lay avy hatrany, i Rastany na Randrianarisoa Stanislas mitondra ny laharana faha 9, kandida natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara.
Namakivaky ny tanàna teto amin'ny Boriborintany faha II, nitety ireo fokontany maro, sady niresaka mivantana tamin'ny vahoaka, no nampahantatra ihany koa ny vinany.
Maro ireo mpanohana azy no niara-nientana nitety isan-trano hampandaniana an'i Rastany, izay tsy vahiny amin'ny mponina intsony, noho ireo asa sosialy maro ataony, singanina amin'izany ireny fanamboarana lalana sy trottoir maro be manerana ny Boriborintany faha II ireny.
lundi, 06 mai 2019 15:49
Fiaraha-miasa: Nanolotra fitaovana ho an'ny Zandarimaria ny avy amin'ny SMTP
Takelaka misy soratra « Halte gendarmerie » miisa 50, miampy horonan-tady fanao fefy « bande de sécurité » miisa 6 no natolotry ny vondrona orinasa SMTP (Société Malgache de Transformation des Plastiques) ho an'ny Zandarimaria tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava androany ho fanamorana ny fanatanterahana ny asa fiarovana ataon'ny Zandary andavan'andro.
« Efa 20 taona niaraha-niasa tamin'ny Zandarimaria ny SMTP ka ho mariky ny firalahiana eo amin'ny roa tonta dia am-pitiavana no anolorana », hoy ny Tale jeneralin’ny SMTP.
« Marika hita maso amin'ny fahatokisana ny Zandarmaria izao, ho fanohanana ihany koa ny ezaka atao eo am-panatanterahana ny asa », hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, Jeneraly Ravalomanana Richard.
lundi, 06 mai 2019 15:42
Alexandre Georget: Ny 100 androny tao amin’ny Ministeran’ny tontolo iainana
Nampahafantarin'ny Minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, Alexandre Georget ampahibemaso androany ny zava-bita teto anivon'ny Ministera tao anatin'ny 100 andro.
Teo ny efa nahavitana fambolen-kazo tamina velarantany 25 624,75Ha raha toa ka 40 000Ha no tanjona. Ny fandraisana fepetra mahakasika ny fitrandrahana tsy ara-dalana ao amin'ny alan'i Vohibola, Bongolava Maitso ary Menabe Atimena.
Nambarany koa fa efa azo ny « scanner biologique » izay hapetraka eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato hiadiana amin'ny fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary malagasy, …
lundi, 06 mai 2019 15:32
FLM Ambatovinaky: May ny ankamaroan'ny Fanaka sy ny antontan-taratasy
Nanaitra ny olona ny nahita setroka mainty nananika ny habakabaka teny Ambatovinaky androany maraina. Nirehitra ny Tranom-pitandremana eto amin’ny FLM Ambatovinaky – Antananarivo.
May ny ankamaroan'ny fanaka sy ny antontan-taratasy. Tsy nisy naninona kosa ny Raiamandreny Pastora Mpitondra Fitandremana sy ny ankohonany, araka ny fanambarana nivoaka tao amin’ny pejy facebook an’ny FLM Ambatovinaky.
Nifanome tanana tamin’ny famonoana ny afo ny Mpamonjy voina an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny mponina ety an-toerana, ireo rehetra izay tafakatra tety ary ny ao amin’ny Foibe FLM tonga nidododo nifanampy sy nifampahery tamin’ny famonoana ny afo. Efa maty ny afo ankehitriny.
lundi, 06 mai 2019 15:09
Fifidianana Solombavambahoaka: Hiantoka ny fandriampahalemana sy hitandro ny filaminana ny Polisim-pirenena
Nanao fanambarana androany ny minisitry ny filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police Rafanomezantsoa Roger, manentana ireo kandida, ireo mpiara-miasa aminy ary ny mpanohana rehetra mba hiatrika izany fifaninanana masina izany amim-pilaminana tanteraka, anatin’ny fanajana ny lalàna, ny fanajana ny fahafahan’ny hafa mpiara-belona amintsika amin’izao vanimpotoanan’ny fisokafan’ny fampielezankevitra ho an’ny fifidianana Solombavambahoaka izao.
Manome toky ny olom-pirenena rehetra ny Polisim-pirenena amin’ny andraikitra sy ireo fepetra efa raisin’izy ireo hiantohana ny fandriampahalemana sy hitandroana ny filaminana mba hahalavorary izany fifidianana Solombavambahoaka izany.
lundi, 06 mai 2019 14:28
Niger: Explosion d'un camion citerne, 55 morts
Près de l'aéroport international de Niamey, dans la nuit de dimanche à lundi, un camion citerne transportant de l'essence a explosé, faisant 36 blessés et 55 morts calcinés.
Le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville, et plusieurs personnes ont voulu récupérer de l'essence dans le citerne qui fuyait, et l'explosion est arrivée faisant instantanément plusieurs victimes.
lundi, 06 mai 2019 14:13
Tailandy: Apetraka amin'ny fiandrihanany ny mpanjaka Rama X
Rehefa niamboho ny mpanjaka Bhumibol Adulyadej ny taona 2016, dia nafindra amin'ny zanany lahy Vajiralongkorn, mitondra ny anarana fanjakana Rama X, ny fiandrihanana.
Nisy ny fisaonana nandritra ny roa taona, ary omaly alahady 05 mey no natao ny fombofomba rehetra ametrahana ny fiandrihanan'ny mpanjaka vaovao.
Maharitra 3 andro ny fety sy ny fombafomba rehetra anatanterahina izany famindrana fiandrihanana izany, izay andaniana vola 26 millions d'euro.
Tomefy olona miakanjo mavo, lokon'ny fiandrianana ny lapan'ny Bangkok, nentina nolanjaina manodidina ny lapa moa ity mpanjaka vaovao ity, izay izy no tanora indrindra hatramin'izay mpanjaka nifadimby izay. Nahatratra 7km ny olona nanaraka izany diabe izany, izay notronon'ny olona efa ho 200 000 tany.
lundi, 06 mai 2019 12:39
Ifanadiana: Nampahery sy nitondra vatsy ho an’ireo traboina ny Praiminisitra
Nitondra vary 5 taonina, voamaina 2,5 taonina, ary kojakoja fampiasa ao an-dakozia, ho an’ireo niharam-boina noho ny hatraintrano nitranga ny alin’ny sabotsy 4 mey 2019 teo, ny delegasionina notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, iatrehana vonjimaika ny fahavoazana.
Nijery ifotony ny fahavoazana sy ny fomba entina hanarenana izany ireto iraky ny fanjakana ireto, sady nankahery ireo traboina. Nambarany fa mbola hisy ny fanampiana entina hanarenana ireo trano may toy ny famatsiana tafo.
lundi, 06 mai 2019 11:16
Armée Malagasy: Le « Bataillon Interarmes de l'Armée » d’Ihosy doté d'un hélicoptère
Andry Rajoelina, Président de la République et Chef suprême des Armée, a fait le déplacement à Ihosy pour remettre au BIA (Bataillon Interarmes de l'Armée) un hélicoptère de type « Écureuil B2 » et des équipements de protections balistiques et des jumelles à vision nocturne pour accroître l'efficacité des interventions et participer à la politique de proximité de l'Armée.
Il a également annoncé l'arrivée, très prochainement, d'un avion de type CASA, pouvant transporter du matériel lourd tel que des groupes électrogènes ou des vivres pour les cas de catastrophes naturelles.